Namely An’i Haryana Sy Punjab Ny Fanakatonana Aterineto Farany Indrindra Tao India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2017 9:30 GMT
Fanehoana an-tsaritany ny fanakatonana ny aterineto ao India , Janoary 2010 – Martsa 2017. Noforonin'ny Foiben'ny Fitantanana ny Serasera (CC BY)
Nakatona nandritra ny andro maromaro ny tolotra Aterineto sy finday tany amin'ny faritra avaratry ny fanjakana Indiana ao Haryana sy Punjab noho ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha heloka bevava itoriana ny mpitarika Gurmeet Ram Rahim Singh , mpitarika sekta goavana malaza nahabe resaka Dera Sacha Sauda .
Tamin'ny 25 aogositra, namoaka didim-pitsarana ny Biraom-pitsarana misahana ny Fanadihadiana manokana fa migadra 20 taona an-tranomaizina ilay mpitarika noho ny antony fanolanana miisa roa . Nitarika hetsi-panoherana nahery vaika ny fanapahan-kevitra, indrindra ho an'ireo mpanara-dia azy, tao amin'ny faritany Haryana sy Punjab sy tany amin'ny faritra sasany ao Uttarakhand ihany koa. Farafahakeliny olona telopolo no maty ary an-jatony no naratra vokatr'izany.
Manoloana ity korontana ity, nanakana ireo tolotra amin'ny aterineto sy ny finday ny manampahefana any amin'ny faritany Haryana sy Punjab , izay fonenan'ny olona miisa 25 tapitrisa mahery.
Inona no mitranga ao Haryana?
Notapahana mandritra ny 72 ora ny tolotra aterineto sy finday ao Punjab sy Haryana.
Araka ny nambaran'ny Lefitry ny Lehiben'ny Sekretaria ao Heryana Ram Niwas , natao mba hanakanana ny fanelingelenana ny fandriampahalemana sy ny fitandroana ny filaminam-bahoaka ny baiko.
Saingy tsy tsotra tahaka izany ny zava-misy. Nanakorontana ny fiainan'ny mponina manerana ireo faritany izay tsy afaka nifandray tamin'ny alàlan'ny rafitra Simaiso, 2G, 3G, 4G, CDMA, GPRS ny fanakatonana. India no manana ny tsena faharoa lehibe indrindra manerantany amin'ny resaka finday aorian'i Shina ary miankina amin'ny tambajotram-pifandraisana finday manerana ny faritany ny firoboroboan'ny toekarena nomerika ao aminy.
Miaraka amin'ny hetsi-panoherana mahery vaika, niantraika tamin'ny lafiny maro tamin'ny fiainan'ny olom-pirenena ny fanakatonana, niainga tamin'ny fanangonana fako ka hatrany an-tsekoly sy ny mpivarotra .
Mpiseran'ny aterineto ao Punjab sy Haryana amin'izao fotoana izao.
Misy olona afaka milaza amiko ve hoe nahoana ny aterineto no sakanana ao Punjab sy Haryana
Hevitry ny Governemanta
Tamin'ny 29 Aogositra, naverina tamin'ny laoniny ny tolotra aterineton'ny finday sy ny Simaiso tao amin'ny faritanin'i Haryana.
Tamin'ny taona 2016, namoaka vahaolana tsy voatery arahina ny Firenena Mikambana mba hiarovana ny fahalalaham-pitenenana amin'ny alàlan'ny fanamelohana ny asam-panakorontanana, ny fanakatonana, na fanafoanana ny aterineto izay fidirana amin'ny fizaram-baovao fototra. Saingy tsy nisy fiantraikany loatra teo amin'ny fanakanana ny aterineto tao India izany, na dia teo aza ny fanakianana fa tsy mahomby ireny ary manakorontana ny fahalalahan'ny tsirairay sy ny fahalalahana an-gazety.
Na dia maro aza ny sampan-draharaha mampiasa ny rafitra ara-teknika tokana mba hamaritana ny fanakatonana, dia tsy nisy ny nilaza fa vetivety dia nirongatra izany tao India nandritra ireo taona vitsy lasa. Efa nahitana fanakatonana ny aterineto miisa 106 hatramin'ny taona 2012 tao India araka ny voalazan'ny Foiben-dalàna misahana ny Fahalalahan'ny Rindrambaiko ao New Delhi.
Tao amin'ny fanjakana Indiana ao Bengal Andrefana, nakatona ny aterineto tamin'ny 18 Jona mba hifehezana ny korontana vao haingana nataon'ireo mpisintaka prô-Gorkhaland. Nitarin'ny manampahefana tao an-toerana imbetsaka ny fandraràna, ka namela ny faritra ho tsy misy fifandraisana nandritra ny roa volana mahery.
Fandraràna ny aterineto ao Darjeeling notohizana hatramin'ny 7 Septambra. Fandraràna nanomboka tamin'ny 18 Jona. Ao amin'ny @_DigitalIndia@MIB_India@rajnathsingh@KirenRijiju ny hanihany.
Efa roa volana izao ny fandraràna ny aterineto tao Darjeeling. Izany ve no antsoinareo hoe India Nomerika. Azafady mba sokafy ny tolotra aterineto
Tamin'ny 7 aogositra, namoaka filazana ny Minisiteran'ny Fifandraisana Indiana izay mikendry ny hametraka lalàna momba ny dingana arahina amin'ny fametrahana ny fanakatonana ny aterineto amin'ny alàlan'ny fantsona roa: ny governemanta foibe sy ny governemantam-panjakana, fangatahana izay tsy maintsy averina dinihina indray ao anatin'ny 24 ora.
Ao anatin'ny fandalinan'izy ireo ny baiko, nanamarika ny bilaogy miompana manokana amin'ny politikan'ny teknolojia ao an-toerana Medianama fa tsy manazava ny fomba hanatanterahana ny fifanarahana momba ny fanakatonana izany filazana izany. Koa satria efa nanitsakitsaka ny vahaolan'ny Firenena Mikambana momba ny fahalalaham-pitenenana antserasera sy nametraka lalàna momba ny tsy fahafahana mifandray iombonana amin'ny mpisera aterineto rehetra ny fanakatonana dia mampiahiahy ny mety ho fiantraikan'ny fitsipika vaovao, tsy amin'ny fahalalahan'ny aterineto ihany fa amin'ny filaminana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao India miha-nomerika hatrany.
Araho ny fanavaozan-drakitry ny Fitsongoana dia ny Fanakatonana Aterineto manerana an'i India ao amin'ny Foiben-Dalànan'ny Fahalalahan'ny Rindrambaiko.